एमाले नेता पाण्डेको प्रश्नः के देउवा कैलाली टुक्र्याउन तयार हुनुहोला ? - Pahilo News
एमाले नेता पाण्डेको प्रश्नः के देउवा कैलाली टुक्र्याउन तयार हुनुहोला ?
सुरेन्द्र पाण्डे,स्थायी कमिटी सदस्य, नेकपा (एमाले)
–देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
अहिलेकोे महत्वपूर्ण पाटो भनेको संविधान कार्यान्वयन नै हो । संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचन भएनन् भने संविधान सुनको अक्षरले लेखेर पनि केही हुने रहेनछ । भनाइ नै छ ‘राजा मरेर राज्य सुन्य हुँदैन ।’ सत्तामा आउने र जाने क्रम चलिरहन्छ । तर, निर्वाचन प्रक्रियाहरु नियमित भएनन् भने त्यहाँ गैरराजनीतिक व्यक्तिले पनि शासन–सत्ता सञ्चालन गर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यस्तो हुँदा समस्या उत्पन्न हुन्छ ।
संविधान कार्यान्वयनको चरण पार गर्न हामीले स्थानीय तहको पुनःसंरचना, स्थानीय निर्वाचन, प्रदेश, राष्ट्रिय र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने गहन जिम्मेवारी छ । ती सबैका लागि आवश्यक पर्ने ऐनहरु अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । यसरी हेर्दा हामी धेरै अप्ठ्यारोमा छौँ । हामीले निर्धारित मितिमा संविधान कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ भने फेरि राजनीतिक समस्याको खाडल उत्पन्न हुनेछ र थप समस्या उब्जिन्छ । यी सबै पक्षमा विचार पुर्‍याएर सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा आई संविधान कार्यान्वयनको चरणमा लाग्नुको विकल्प देखिँदैन । यसका लागि नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच एकता हुनुपर्छ र यी दलले अरु शक्तिलाई पनि सहमतिमा ल्याएर अघि बढ्नुपर्छ । हामीले यसो गर्न सक्यौँ भने देश सकारात्मक दिशामा अघि बढ्छ, होइन भने समस्या आउन सक्छ ।
–तपाईँले दलहरुबीच सहमति र संविधान कार्यान्वयनको कुरा गर्नुभयो । अब ०७४ माघसम्ममा सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर संविधान कार्यान्वयन हुने सम्भावना चाहिँ कत्तिको देख्नु हुन्छ ?
निर्वाचन आयोगले ऐन बनेको छ महिनापछि मात्रै निर्वाचन गर्न सकिन्छ भनेको छ । तर, अहिले दसैँ, तिहार र छठले हामीलाई छोपेको छ । यस अवधिमा कुनै विधेयक संसदमा आउने सम्भावना छैन । ऐन कार्तिकको अन्तिमतिर बन्न सक्छ । ऐन बनाउन दुई–तीन महिना लाग्नसक्छ । यसरी हेर्दा चैतसम्ममा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन ।
म आफैँ भने असारसम्ममा निर्वाचन भए पनि हुन्थ्यो भन्नेमा छु । त्योभन्दा पनि उता गयो भने त चुनावी मौसम नै जान्छ । हामीकहाँ सबै महिनामा चुनाव गर्ने अवस्था हुँदैन । त्यसैले असारसम्ममा पनि निर्वाचन भएन भने चुनावको मौसम जान्छ । त्यसपछि झन चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति गुज्रिदैँ जान्छ र समस्या हुन्छ । त्यसका लागि पनिे छिटोभन्दा छिटो सबै दलबीच सहमति गरेर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।
–एमालेले चाहिँ कत्तिको तयारी गरिरहेको छ ?
मैले पार्टीमा निर्वाचनका लागि ऐन बनाउने कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भनेको छु । अन्य दललाई पनि दबाब दिएर कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्दै आएको छु । अहिले प्रतिपक्षमा रहेको जिम्मेवार दल भएको नाताले पनि एमालेले त्यो भूमिका खेल्ने हो भने धेरै सहज हुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु ।
–एमाले र माओवादीबीच तिक्तता बढेको छ । यस्तो अवस्थामा माओवादी नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेको छ । के यो सम्भव देख्नु हुन्छ ?
हामी संविधान संशोधन गर्न सक्छौँ । हामीले यो संविधान नै अन्तिम हो भनेका छैनौँ । आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन र परिमार्जन गर्न सकिन्छ । तर, अहिले जुन ढंगले सत्तारुढ दलले संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेको छ, हामीले बुझेका छैनौँ । कुन प्रयोजनका लागि संशोधन गर्ने हो, त्यसका आधार के हुन् र किन आवश्यक भयो भन्ने कुराको कुनै तयारी बिना नै यो प्रस्ताव आउनुलाई एमालेले ठीक ठानेको छैन ।
–अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या सीमांकनको नै हो । यसमा एमालेको धारणा के हो ?
एमाले मात्रै सीमांकनको विषयमा अराजक देखियो भन्ने आरोप लागेको छ । यो सत्य होइन । मोरङ, झापा र सुनसरी प्रदेश नम्बर दुईमा मिलाउनु हुँदैन भन्ने माग एमालेका नेताको मात्र हो ? के त्यहाँ कांग्रेस, माओवादीका पनि नेता छैनन् ? त्यो बुझनु पर्दैन ? हिजो कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला त्यो कुरामा मञ्जुर हुनुहुन्थेन । के उहाँ आज मञ्जुर हुनुहोला ? कैलाली फुटाउन नमान्ने नेतामा कांंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि हो । अब उहाँले मान्नु होला ? के उहाँ अब कैलाली फुटाउन तयार हुनुभएको हो ? यी उदाहरण मात्र हुन् । त्यसैले यी अहिले जति पनि कुरा भएका छन्, ती हचुवाका भरमा आएका हुन् । त्यसमा हामीले आत्तिनु पर्ने केही छैन ।
–अहिले जति पनि समस्या आएका छन्, ती सबै एमाले–माओवादी गठबन्धन जोगाउन नसकेकाले आएको भन्ने पनि चर्चा छ । यो सत्य हो ?
गठबन्धन एमालेले तोडेको होइन । गठबन्धन माओवादीले तोडेको हो । त्यसैले मैले कसैलाई बलजफ्ती प्रेम गर्न पाउनुपर्छ भनेर हुँदैन । प्रेम सहमतिमा हुन्छ, प्रेम खुसीमा हुन्छ । मन नलागीनलागी प्रेम हुँदैन । आफूलाई कुनै केटी मन पर्‍यो भनेर मैले तिमीलाई माया गर्न पाउनै पर्छ भनेर कुद्दैमा हुन्छ ? केटीले पनि त आफूलाई मन पराउनुपर्‍यो नि ? माओवादीले प्रेम तोडेर हिँडेको भएकाले तैँले प्रेम गर्नैपर्छ भनेर हुँदैन ।
–आगामी दिनमा माओवादीसँग फेरि एमालेको ‘प्रेम’ बस्ने सम्भावना कत्तिको देख्नु हुन्छ ?
अहिले माओवादीसँग प्रेम टुटेको अवस्था हो । तर, भविष्यमा अब फेरि प्रेम नै नहोला भन्न सकिन्न । अहिलेको अवस्थामा एक दलले मात्र सरकार सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन । यो अवस्थामा भविष्यमा फेरि पनि माओवादीसँग सहकार्य नहोला भन्ने अवस्था छैन । माओवादी वामपन्थी पनि भएकाले सहकार्य कांग्रेससँग भन्दा माओवादीसँग नै हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।
हामीले विगतलाई हेर्ने हो भने पनि कुनै समय माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच कतै पनि भेट हुँदैनथ्यो । तर, हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि उहाँले नै कतिपय बेला माओवादीसँग एकता पनि हुनसक्छ भन्नुभयो । यो प्रेम भन्ने चिज नै यस्तै हो ।
राजनीति स्थायी कुरा हो भने सम्बन्ध अस्थायी कुरा हुन् । त्यसैले अहिलेको विवादलाई हेरेर माओवादीसँग कहिल्यै सम्बन्ध नै हुँदैन भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिनँ । राष्ट्रिय राजनीतिको आवश्यकताले माओवादीसँग भोलिका दिनमा पनि सहकार्य गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ । अहिले तत्कालका लागि चाहिँ हाम्रा अध्यक्षले भनेको एउटा कुरामा म सहमत छु । एक जनाले प्रेम त्यागिसकेपछि मलाई त्यहीसँग प्रेम गर्नुछ भन्ने कुद्नुपर्ने जरुरत छैन ।
–गुटबन्दी अन्त्यका लागि भन्दै एमालेले १० बुँदे विशेष प्रस्ताव नै सार्वजनिक गरेको थियो । तर, त्यो प्रस्तावले मूर्तता पाएजस्तो देखिएन नि ?
सही र गम्भीर कुरा उठाउनुभयो । निश्चित रुपमा एमालेभित्र केही अराजकताहरु देखा परेका छन् । गुटबन्दीले सीमा नाघिसकेको छ । त्यसबाट यता फर्किन निकै मुस्किल छ । गुटबन्दी अहिले नशाजस्तो बनेको छ । नशाले मानिसलाई उत्ताउलो बनाउँछ । बेलुका तपाईँलाई नशा लागेको छ भने उत्ताउलो बन्नुहुन्छ । बिहान छाडेपछि ठण्डा हुनुहुन्छ । गुटबन्दी पनि नशा हो, ठण्डा हुन केही समय लाग्छ । बुद्धिमानहरु नशा नलाग्दै ठण्डा हुन्छन्, बुद्धि नभएकाहरु नशापछि ठण्डा हुन्छन् ।